မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားတို့ မေလ ၂ဝ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မြို့ရှိ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြစဉ်
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက မြန်မာပြည် ရဲ့ လက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေ အောင်မြင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မိတ်ဆွေသစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိ West Point ခေါ် အမေရိကန် စစ်တက္ကသိုလ် မှာ မနေ့ကကျင်းပတဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း ပွဲမှာ သမ္မတအိုဘားမားက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ အာဏာရှင်စံနစ်ကျင့်သုံးပြီး အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုကို ရန်သူလိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် ဟာ အခုပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ မဆုတ်မနစ် သတ္တိစွမ်းပကားတွေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ သံတမန်ရေး အစပျိုးဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် အရင်က နိုင်ငံတကာကို တံခါးပိတ်ကျောခိုင်းနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံ တစ်ခုမှာ အခုတော့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မြင်တွေ့ လာနေရပါပြီ။ မြန်မာအစိုးရဟာ မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေးလျှော့ချဖြတ်တောက်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကို ကူးလူးဆက်သွယ်လာခဲ့ပါပြီလို့ သမ္မတ ကပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ အဲဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် လက်ရှိ မြန်မာပြည်အတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးပါတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ရေးအတွက် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ ပံ့ပိုးနေပြီဖြစ်သလို အခါအားလျော်စွာ တိုက်တွန်းဆွေးနွေး အကြံပေးမှုတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သမ္မတအိုဘားမားက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်လမ်းကြောင်း ကို ပြန်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အပြောင်းအလဲတွေသာ အောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ မိမိတို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းမယ့် မဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားသွား ပါတယ်။ မေလ ၂ဂ ရက် မနေ့က ကျင်းပတဲ့ အဲဒီ West Point ဝက်စ်ပွိုင့် စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ သမ္မတ အိုဘားမားက စစ်တပ်အင်အားကို တကယ်လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့လက်ထဲမှာ တူတချောင်း ရှိတယ်ဆိုပြီး အရာရာကို ထုနှက်ရမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွှေနဲ့ အစိုးရအလိုတော်ရိစီးပွားရေး သမားတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါလိုပျံ့နှံ့နေကြောင်းများအပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သံတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းရွေးချယ်တင်မြောက်ခံ အစိုးရတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ လူသားအရေ အတွက်ဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိဘူးအောင် များပြားနေပြီဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့်လည်း ပြောကြား သွားပါတယ်။
When will Burma's military consider U.S. military as an example? The time is NOW!
May 29, 2014 01:01 AM